Uma ungabaza, ungakudluli - Ukuthuthuka Komuntu - U-Edwin Van Der Hoeven
ukwamukelwa, ukukhetha, uthando, ukungabaza, vertrouwen, isiqiniseko
~ Kuthathani ukunqoba ukungabaza? Ukubheka futhi ukuthi yini engakunika ukuphepha. Ukuvala amehlo akho emhlabeni wakho wangaphandle bese ungena. Nguwe kuphela ongakunikeza isiqiniseko empilweni. ~
Uma ungenasiqiniseko sokuthi wenzeni, uma ungabaza, uphinde ukhethe. Ungaziphatha kanjani, kepha futhi hhayi ukwenza kuhlala kuyisinqumo. Ungagcina ungabaza ngokungafani. Kepha ukungabaza njalo kulandelwa ukuqiniseka. Muva nje umngani ungibhalele: uma ungabaza ungabambeki. Ifilosofi evela kwengqondo.
Izici zangaphandle zinquma ukungabaza
Uma ucabanga ngakho ngokujulile, kukhombisa ukuthi uvame ukubheka imvelo yakho yangaphandle lapho ungabaza. Uma ngokungabaza kufanele ungafiki. Ngakho-ke imvelo yakho yangaphandle inquma 'isiqiniseko'noma kunalokho, ukungabaza okusekela izinqumo zakho. Uma kunokuqiniseka, khona-ke lezo zimo zangaphandle azibalulekile kangako, uma kungenjalo. Lapho-ke ungabamba futhi ngokushesha ukhohlwe sonke isimo. Kepha uma uqhubeka nokukhathazeka ngezimo zangaphandle, lokho okungaphezu kwamandla akho, khona-ke ngeke ukuthole kalula.
Yini ekunika ukuphepha?
Ukuphepha yindaba yangaphakathi, ukungabaza kungaphandle. Lapho ngokungabaza, ubukeka kanjani umhlaba wangaphandle? Yiziphi izimo noma abantu ezenza ungabaze? Kepha mhlawumbe okubaluleke kakhulu, kungani uvumela izimo zangaphandle ukuba zinqume isimo sakho sengqondo? Kuthathani ukukwenza ubheke ngaphakathi futhi, wagcina nini ukuhlangana nawe? Ukucinga futhi lokho ongakunikeza ukuphepha. Ukuvala amehlo akho emhlabeni wakho wangaphandle bese ungena ngaphakathi.
Ukuncika kukwenza ungabaze
Iqiniso, ingabe likhona ngempela? Noma kukhona nje inkohliso yangaphandle onganyakaza kuyo ekunika ukungabaza neminye imizwelo. Ukuphela kokuqiniseka kufihlwe 'kuwe', lapho iqiniso lakho lingatholakala. Iningi labantu, nokho, ligwinywa ngumhlaba wangaphandle, yinkohliso egcinwe ngabanye. Akekho ongakulethela injabulo yangempela, akekho ozokuthanda ngaphandle kwemibandela, akekho ohlala ekulungele. Lokhu kungenxa yokuthi yizici zangaphandle ezikwenza uncike. Uyinjabulo, uluthando, nguwe wedwa ongakwazi ukuzitholela wena ngokuzibheka ngokwethembeka nangokusobala.
Zemukele ukuthi ungubani ngempela
Nguwe kuphela ongakunikeza isiqiniseko empilweni. Kepha ungesabi, kulokho isizungu kuvela ukwelashwa. Kusukela kunesizungu, ubunye buvela ngokuzenzakalela lapho siphinda sazi futhi sazi ukuthi singobani, siyini. Uthando lungamandla angatholwa ngaphakathi kwethu kuphela futhi uma uphinde wenza lokho kwangempela kweqiniso, akukho lutho olunamandla ngokwanele ukukwenza ungabaze. Uma ungabaza, ungakudluli, ngakho-ke thola amandla ukuze ukwazi ukuqhubeka empilweni yakho ngokuqiniseka. Ngoba awunasinekelapho-ke akukho okuzokuvimba ekuthatheni lokho kweqa futhi ube ngokwakho.
(kubhaliwe ku-12 ngo-December 2013)
OkwangaphambiliniNgaphambiliniVuka ngemuva kokuwa uqhubeke nokuhamba
OkulandelayoUkunyakaza kuvela esitejiOlandelayo
I-22 Okthoba, 2013